Sacuudiga oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talo galay gudashada Cumrada | Somaliland Mirror
Home WARARKA Sacuudiga oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talo galay gudashada Cumrada
adminSep 30, 2020WARARKA0
Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talo galay gudashada Cumrada, oo la hakiyay muddo lix bilood ah sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus. Si looga hortago faafitaanka COVID-19, dadka cumraysanaya ayaan taaban doonin Xijrul Aswadka. Masjidka Xaramka oo ah halka ay Kacbadu ku taallo ayaa maalintii la nadiifin doonaa 10 jeer.
Sidoo kale dadka ay ka muuqdaan calaamadaha COVID-19 ayaa loo diyaariyay qolal lagu karantiilo. Sacuudi Carabiya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhwaaqday in si tartiib tartiib ah loo furi doono Cumrada, wixii loo gaaro bisha soo socota. Laga bilaabo 4-ta October, dadka u dhashay Sacuudiga iyo ajaanibta deggan ayaa loo oggolaan doonaa gudashada Cumrada, iyadoo maalintii ay keliya Masjidka Xaramka ee Maka ay geli karaan 6,000 oo qof. Halka 18-ka October, ay Boqortooyadu oggolaan doonto in 15,000 oo xujey ah ay Cumrada ku gutaan Al-Masjid al-Nabawi, ee magaalada Madiina. Dadka ka imaanaya bannaanka Sacuudiga ayaa loo oggolaan doonaa gudashada Cumrada wixii loo gaaro 1-da November.
Previous PostWararkii ugu dambeeyay ee Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda Next PostQaar kamid Ah xildhibaanada darafyadda Somaliland Ayaa kasoo horjeedsaday go’aankii golaha wakiiladda ku ansixiyey xeerka Doorashooyinka Somaliland